Feminista sy mpiaro mpiasa ao Meksika, miatrika andiam-pisamborana sy fampidirana am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Tao anatin'ny tapabolana, marobe ireo mpikatroka voasambotra tao amin'ny firenena
Voadika ny 26 Jona 2020 13:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, عربي, Ελληνικά, Español
Susana Prieto, Claudia Hernandez ary Kenia Hernandez. Sary natambatry ny Global Voices, sary an'ny IM-Defensoras ary pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Milenio.
Tsy mampihena ny mety hahitan-doza na ny herisetra atrehan'ireo Meksikàna mpikatroka sy mpiaro ny zon'olombelona ary mpanao gazety akory ny zava-mitranga ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina COVID-19. Tato anatin'ny andro vitsivitsy, voatatitra ny fisiana herisetra, fandrahonana ho faty, fisamborana ary famonjàna tany amin'ny fanjakana samihafa ao amin'ny firenena noho ny mety ho famoronana heloka bevava entina hanenjehana azy.
Mpisolovava i Susana Prieto Terrazas, nanokana ny asany ho fiarovana ny zon'ireo mpiasan'ny “maquila” (fanamarihan'ny mpandika: orinasa mahazo fahafahana ara-hetra ary mitodika manokana amin'ny famokarana vokatra ho an'ny tsena ivelany) ao amin'ny tanànan'i Matamoros Tamaulipas, avaratr'i Meksika, izay nandray anjara tamin'ilay hetsiky ny mpiasa nantsoina hoe Movimiento 20/32. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2019 dia nisy fitokonana nandraisan'ny mpiasa an'arivony maro anjara ary nitakian-dry zareo fampitomboana karama sy fepetran'asa mendrika kokoa.
Ny 8 Jona, nosamborin'ny polisy tao an-toerana izy noho ny fiampangàna azy no nikotrika “korontana, fandrahonana ary herisetra natao tamina mpiasam-panjakana”, nanamafy ny fisamborana azy ireo manampahefana avy amin'ny fitsaràna tao amin'ny fanjakàna. Kanefa, io fisamborana azy io dia lazain'ireo fikambanana maro samihafa ao Meksika, toy ireo sendikà sy mpiaro zon'olombelona, fa antony ara-pôlitika ho famaizana azy noho ny fiampangàny ireo tsy fanjarian-draharaha sy kolikoly ataon'ireo orinasa maro rantsana izay ampiharin-dry zareo amin'ireo mpiasany ihany. Any am-ponja i Prieto Terrazas amin'izao fotoana izao miandry ny famaritana ny raharaha miandry azy araka ny lalàna .
Andro roa talohan'ny nisamborana an'i Prieto Terrazas, ny 6 Jona, nosamborin'ny polisy avy amin'ny fanjakan'i Meksikô, renivohitra, i Kenia Hernández, feminista mpikatroka. Voasambotra niaraka taminy koa ireo mpiasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany, niisa telo, tafara-dia taminy tao anatin'ny fiarany.
“Nandritra ny fisamborana, ,navoaka niala tamin'ilay fiara nandehanany i Kenia sy ireo nàmany telo. Nahataka izy ary voadaroka kosa ireo nàmany. Nalaina teny amin'izy ireo ny zavatra rehetra teny aminy ary samy tsy nisy nampahafantarina izay antony isamborana azy ry zareo”, hoy ny fiampangàn'ny Colectivo Zapata Vive, fikambanana niavian'ilay mpikatroka. Naiditra am-ponja ihany koa i Kenia Hernández, na dia navotsotra aza andro dimy taty aorian'izay, voafatotry ny dingana ara-pitsaràna sy narahana fepetra fitandremana.
Tao anatin'ny fanambaràna nataony, nalefa tety anaty tambajotra, ary taorian'ny namotsorana azy, dia nilaza i Kenia hoe : “ Tsy vitan-dry zareo akory ny nandrafitra izay heloka bevava vita (…) Tsy nolazain'izy ireo tamiko ny antony rehefa nisambotra ahy ry zareo taorian'ilay fihetsiketsehana”.
#Mivantana: Fandraisana toerana ho amin'ny famotsorana sy ny raharaham-pitsaràna manjo an'i #KeniaHernández https://t.co/clld4fiGWF
— Cencos (@cencos) 12 Jona 2020
Ny omalin'io, 5 Jona, i Claudia Hernández, mpiaro zon'olombelona no nosamborin'ny polisim-panjakana ao San Luís Potosí raha mbola teo am-pandraisana nandray anjara tamina fihetsiketsehana nanoherana ny famonoana tsy nandalo fitsaràna an'i Giovanni López, tovolahy iray mpiasa maty taorian'ny nisamboran'ireo polisy nihazona azy noho izy tsy nanao arontava teo ivelan'ny tranony.
Araka ny fanambaràna iray avy amin'ny Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Hetsiky ny Fikambanan'ireo vehivavy mezo-amerikàna [fr] Mpiaro Zon'Olombelona), namita iraka fanarahamaso sy fanelanelànana no nahatongavan'i Claudia nanatrika ilay fihetsiketsehana nanaovana diabe ; rehefa avy notazonina niaraka tamin'ireo olona hafa, dia nafindra ho amina toerana tsy fantatra izy. Toa an'i Kenia Hernández, navotsotra i Claudia, saingy voafatotry ny dingana ara-pitsaràna sy narahana fepetra fitandremana.
??? #AlertaDefensoras Tazonin'i MEKSIKA amin'ny fomba tsy ara-dalàna, ampijaliany sy helohiny ho nahavita heloka bevava tany San Luís Potosí ilay mpiaro zon'olombelona, Claudia Hernández, noho izy nandray anjara tamina hetsipanoherana ny famonoana an'i Giovanni López
?vaovao misimisy kokoa➡https://t.co/PWWsMw93mg pic.twitter.com/b2My8YLzhF
— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) 8 Jona 2020
Ankoatra ireo fisamborana sy fampidirana am-ponja dia lasibatry ny fandrahonana ihany koa ny Consorcio Oaxaca, fikambanana iray feminista manandratra ny fanajàna sy ny fampiharana ny zo maha-olona ireo vehivavy ary ny fitoviana lenta.
Ny 15 Jona tokony ho tamin'ny 8 ora sy 40 minitra maraina, nahita harona mainty iray nisy sombin-kena, izay toa loham-biby, ilay fikambanana, nampiarahana tamin'ny hafatra fandrahonana sy mpanambany vehivavy, napetraka teo am-baravaran'ny toeram-piasàny.
Nampahatsiahivin'ilay fikambanana fa hatramin'ny nandefasany fanentanana nitakiana ny rariny noho ireo famonoana vehivavy nitranga tao amin'ny fanjakàn'i Oaxaca, dia marobe ireo tranga fandrahonana niseho.
Ho an'io tranga io, ny Kaomity Iraisan'i Amerika momba ny Zon'Olombelona dia manainga an'i Meksika hanazava ireo zavamisy mahazo ny Consorcio Oaxaca, sy haka izay fepetra sahaza mba hiarovana ilay fikambanana manoloana ireo fandrahonana, ary indrindra fa ho an'i Soledad Jarquín, feminista mpanao gazety izay mpikambana ihany koa ao anatin'ny Consorcio, sady renin'i María del Sol, nizaka ny famonoana vehivavy koa.
Ny #CIDH dia manainga an'i #Meksika hitondra fanazavana, handinika ny asa fiarovana ataon'ny @consorciooaxaca ho toy ny petra-kevitra hiandohàna ary handray izay fepetra ilaina hiarovana ilay fikambanana amin'ireo fandrahonana, indrindra fa ho an'i Soledad Jarquín sy ny ankohonany. #DDHH 3
— CIDH – IACHR (@CIDH) 19 Jona 2020